OTU ESI ECHEKWA TAABỤ NA MOZILE - MOZILLA FIREFOX - 2019
Isi Mozilla Firefox
Otu esi echekwa taabụ na Mozilla Firefox
Mgbe ụfọdụ, ọnọdụ dị njọ nwere ike ime na ngwaọrụ na-agba ọsọ gam akporo - dịka ọmụmaatụ, igwefoto jụrụ ịrụ ọrụ: ọ na-enye ákwà ngebichi oji kama iji foto ma ọ bụ ọbụna njehie "enweghị ike ijikọ na igwefoto", na-ewe foto na vidiyo, ma enweghị ike ịzọpụta, wdg. Anyị ga-agwa gị otu esi edozi nsogbu a.
Ihe kpatara nsogbu igwefoto na ngwọta
Ụdị njehie dị iche iche ma ọ bụ nsogbu na ntaneti foto nwere ike ime maka isi ihe abụọ: ngwanrọ ma ọ bụ ngwaike. Ndị ikpeazụ anaghị adị mfe idozi onwe gị, mana ọbụna onye ọrụ novice nwere ike idozi nsogbu na ngwanro ahụ. O nwekwara ike na igwefoto na-anọgide na-arụ ọrụ, ma enweghị ike ịzọpụta nsonaazụ nke agbapụ, ma ọ bụ ha dara ogbenye. Na ọnọdụ ndị dị otú a na-amalite.
Usoro 1: Lelee oghere igwefoto
N'afọ ndị na-adịbeghị anya, ọtụtụ ndị na-emepụta ihe nkiri ahụ na ihe nkiri ahụ onwe ya na oghere nke ihe ntanetị. Mgbe ụfọdụ, ọ na-esiri mmadụ ike, ọbụna mgbe ọ na-ahụ anya nke ọma, ịhụ ọkwa ya. Lebakwuo anya, ị nwere ike iji nwayọọ na-ehicha ya. Iche ihe nkiri a - na-agbanyeghị na mgbapụta: nchebe na ya bụ ihe na-abaghị uru, na njedebe nke ihe ngbapụ.
Ọzọkwa, iko mkpuchi nke oghere nwere ike bụrụ ihe dị arọ ma ọ bụ ájá n'oge ọrụ nke ngwaọrụ ahụ. Ichacha ya dị ọcha ga-enyere mmanya na-aba n'anya akachapụkwa maka nlekọta LCD.
Usoro 2: Lelee kaadị SD
Ọ bụrụ na igwefoto na-arụ ọrụ, ọ na-ewe ma foto ma vidiyo, ma ọ nweghị ihe a ga - azọpụta - ikekwe, enwere nsogbu na kaadị ebe nchekwa. O nwere ike ịbụ na ọ ga-ejupụta na ya, ma ọ bụ ọ nwere ike jiri nwayọ daa. Ịnwere ike ịnwa ịme kaadị nchekwa nke juru na ya ma ọ bụ na ị na-ebufe ụfọdụ faịlụ na kọmputa ma ọ bụ nchekwa igwe ojii (Dropbox, OneDrive, Yandex.Disk ma ọ bụ ọtụtụ ndị ọzọ). Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu doro anya, ọ bara uru iji gbalịa ịhazi ụdị kaadị a.
Nzọụkwụ 3: Malitegharịa ngwaọrụ ahụ
N'agbanyeghi otua ọ ga - ada ụda, ọtụtụ ọnụọgụ njehie nke na - eme n'oge ọrụ nke OS nwere ike idozi site na ịghagharịa. Eziokwu bụ na enwere ike ịnweta data na RAM, nke bụ ihe kpatara ịda mbà n'obi. Onye ọrụ RAM-arụ ọrụ na gam akporo na ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ anaghị enwe ọrụ nhicha zuru ezu, RAM niile - a ga-eme nke a naanị site na ịmịgharịa ngwaọrụ ma site na nchịkọta nhọrọ (ma ọ bụrụ na ihe dị otú ahụ dị n'ime ya) ma ọ bụ site na njiko ọnụ "Gbanyụọ ụda ahụ" ma "Nri".
Nzọụkwụ 4: Kọwaa data na oghere nke ngwa ngwa igwefoto
Dị ka ị maaraworị, gam akporo na-etinye onwe ya na mpempe akwụkwọ n'ụdị esemokwu dị iche iche - lee, dịka ọdịdị OS a, njehie na-eme site n'oge ruo n'oge. N'okwu a, ihe na-adabaghị na faịlụ ndị dị na igwefoto ahụ: ederede na-ezighị ezi dị na faịlụ nhazi ma ọ bụ mbinye aka adịghị adaba. Iji kpochapụ ihe ndị na-ekwekọghị ekwekọ, ọ bara uru iji kpochapụ faịlụ dị otú ahụ.
Achọrọ ịga "Ntọala".
Chọta ha Ngwa Manager.
Na Ngwa Ngwa, pịa taabụ "Ihe niile"ma lee ha anya "Igwefoto" ma ọ bụ "Igwefoto" (dabere na ngwa ngwa).
Pịa aha ngwa ahụ.
N'otu oge na njirimara ya, pịa Clear Cachemgbe ahụ "Kọwaa data"mgbe - "Kwụsị".
Iji dozie nsonaazụ, ị nwere ike ịmalitegharịa ama (mbadamba).
Lelee igwefoto. N'ọtụtụ ọnọdụ, ihe nile ga-alaghachi na nkịtị. Ọ bụrụ na nsogbu ahụ ka dị - gụọ na.
Usoro 5: Wụnye ma ọ bụ wepu ngwa ngwa igwefoto nke atọ
Mgbe ụfọdụ, e nwere ọnọdụ mgbe ugbochi maka igwefoto adịghị arụ ọrụ - n'ihi itinye aka na faịlụ ndị ahụ site n'aka onye ọrụ ma ọ bụ mmelite arụnyere na-ezighị ezi. Ọzọ, enwere ike ịchọta nke a na ntinye ike nke atọ (ị nwere ike ịlele ndepụta nke chinchi). Ọnọdụ nwere ike idozi nrụnye igwefoto nke atọ - dịka ọmụmaatụ, site na ebe a. Ọzọkwa, ọ dịghị onye na-egbochi gị itinye onye ọ bụla ọzọ na Ụlọ Ahịa Play. Ọ bụrụ na nsogbu ahụ na igwefoto omenala - ị nọ n'okpuru.
Ọ bụrụ na ị na-eji nsụgharị nke atọ nke igwefoto, ma ịkwesịrị iji ngwaahịa ahụ, ma n'ihi ihe ụfọdụ ọ naghị arụ ọrụ, mgbe ahụ, ị ​​ga-agbalị ịnwepụ ngwa ngwa na-abụghị nke ala: ihe kpatara nsogbu ahụ nwere ike ịbụ esemokwu na usoro ị na-ewepu wepụ otu n'ime ihe mgbakasị ahụ.
Ịdọ aka ná ntị maka ndị ọrụ nwere mgbọrọgwụ-ohere: ị nweghị ike ihichapụ ngwa ngwa-arụ ọrụ igwefoto ọ bụla!
Nzọụkwụ 6: Tọgharịa ngwaọrụ na ntọala ntọala
Mgbe ụfọdụ nsogbu nsogbu software nwere ike ịdabawanye, ọ gaghịzi enwe ike idozi ya site na ịmalite na / ma ọ bụ ikpochapụ data. Na nke a, anyị na - eji igwe egwu - anyị nwere ike ịtọgharịa ngwaọrụ ahụ. Echefula ihe ndabere dị mkpa site na windo n'ime.
Kedu ka esi edozi gam akporo ngwaọrụ tupu ikpuchi
Anyị weghachite ntọala na gam akporo
Usoro 7: Na-egbukepụ Ngwaọrụ
Mgbe ngwa igwefoto na-aga n'ihu inye njehie ma ọ bụ ngere ojii ma mgbe ịtọgharịrị ntọala ahụ na ntọala ụlọ ọrụ, o yiri ka ọ bụ oge ịgbanwe fatịlaịza. Ihe kpatara nsogbu ndị ahụ na igwefoto dị n'ọnọdụ dị otú ahụ bụ mgbanwe mgbanwe nke faịlụ faịlụ nke nrụpụta enweghị ike idozi. O nwekwara ike ịbụ na ị rụnyela ihe arụmọrụ nke atọ, nke nwere igwefoto. Dịka iwu, nke a bụ ihe a na-akpọ n'abalị. Anyị na-akwado ka ị nweta nkwalite na ngwanrọ software iji kpochapụ mmetụta nke ihe ndị ọzọ.
Usoro 8: Gaa na ụlọ ọrụ ọrụ
Ihe kacha njọ nke mmemme bụ mmekorita anụ ahụ - ma nke igwefoto n'onwe ya na eriri ya, na nke motherboard nke ngwaọrụ gị. Ọ bụrụ na otu n'ime ụzọ ndị a enyere aka, mgbe ahụ ị nwere ike inwe nsogbu ngwaike.
Isi ihe kpatara ọnyá bụ 3: mmebi ngwaọrụ, kọntaktị na mmiri na mmepụta ụlọ ọrụ nke otu n'ime components ndị akọwapụtara. Ihe ikpe ikpe a ga-ahapụ ka ọ pụọ na-enweghị ihe mfu, ma ọ bụrụ na ekwentị ma ọ bụ mbadamba ahụ dara, ma ọ bụ, ọbụna njọ karị, nọ na mmiri, mgbe ahụ, nrụzi ahụ nwere ike ịda na ngwongwo. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe karịrị pasent 50 nke ego nke ngwaọrụ - ọ bara uru iche echiche ịzụrụ otu ọhụrụ.
Ebumnuche maka inoperability nke igwefoto a kọwara n'elu bụ ihe niile ngwaọrụ na-agba ọsọ gam akporo.
https://termotools.com ig.termotools.com © Mozilla Firefox 2019